China – Min Thayt
ဖွံ့ဖြိုးမှုသို့ သွားရာလမ်း – တရုတ်
အနောက်နိုင်ငံအများစုဟာ တရုတ်ရဲ့ တရုတ်နည်းတရုတ်ဟန်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကို ဝေဖန်စောကြောကြတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်မှာ နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို စောဒကတက်ကြတယ်။ ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ဝေဖန်စောကြောနေပါစေ၊ တရုတ်ပြည်ဆိုတဲ့ ရထားကြီးကတော့ သူ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ မှန်မှန် ခုတ်မောင်း လျက်…။ သမိုင်းသင်ခန်းစာ တရုတ်ဟာ သူလျှောက်မယ့်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းကို သူ့ဘာသာ ခင်းတယ်။ တော်လှန်ရေးအစိုးရဟာ အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အလွဲလွဲအမှားမှားတွေလည်း ကြုံခဲ့၊ ချွတ်ယွင်းချက်တွေလည်း ဒုနဲ့ ဒေး...
Book Review Literature Politics
စိနဗေဒ နှင့် မြန်မာ
Min Thayt December 12, 2021 December 12, 2021
မူရင်း - မောင်အောင်မျိုး၊ In The Name of Pauk-Phaw (Myanmar’s China Policy Since 1948)ဘာသာပြန် - စိန်ဝင်းစိန် ၊ ပေါက်ဖော်တဲ့…လား။ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ ပထမအကြိမ်။၂၀၁၅ ဇွန်။ တရုတ် - မြန်မာအရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပညာရပ်ဆန်ဆန်၊ သုတေသနနည်းကျ ရေးသားထုတ်ဝေထားသော စာအုပ် သည် မြန်မာဘာသာနဲ့ များများစားစား မရှိပါ။...
တရုတ်မုန်းတီးရေးအသံ လေနဲ့ ဝမ်းနဲ့ ကွဲရဲ့လား
Min Thayt October 18, 2021 October 18, 2021
၁။ မြန်မာတွေ တရုတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို မရှောင်နိုင်ပါ။ လောလောဆယ်မှာ တရုတ်ကို ထိပ်တိုက်တွေ့တာထက် တရုတ်နဲ့ ဘယ်လို အလိုက်သင့်အလျားသင့်နေထိုင်မလဲဆိုတာကိုသာ တွေးသင့်တယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ အဓိက သဘောထားတိမ်းညွှတ်ချက်ဖြစ်သင့်တယ်။ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ကြည့်ရင်လည်း၊ တရုတ် ရဲ့ ဝါးမြိုမှုကို လက်ခံဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး၊ လိုက်လျောပေးလိုက်ရမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘက်က လက်တွေ့ အားထုတ်မှုနဲ့ တုံ့ပြန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။...
Papers PDF Download Politics
Min Thayt October 9, 2020 October 9, 2020
Khaki-Capital-and-Chinese-Investment-Trap-by-Aung-Ko-Ko-ToeDownload တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာ မြန်မာပြည်အတွက် ထွက်ပေါက်လား၊ ထောင်ချောက်လား။စစ်စီးပွားရေး၊ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအပေါ် စစ်ရေးအထောက်အပံ့တွေနဲ့ တရုတ်အရင်းအနှီးတွေ ဘယ်လို ပတ်တုပ်ချည်နှောင်ထားသလဲ။ဖြစ်စဉ်တချို့ကို စဉ်းစားနိုင်ဖို့ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးပါတယ်။ ဆောင်းပါးအနှစ်ချုပ် တရုတ်ပြည်သည် မြန်မာနဲ့ ပထဝီစီးပွားရေးအရ ဆက်နွှယ်ချုပ်နှောင်ထားသော အခြေအနေ၌ ရှိနေပါသည်။ ၎င်းအခြေအနေ၌ တရုတ်ငွေလုံးငွေရင်းများဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလာသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်၊ တည်ဆဲ / လက်ဟောင်း စစ်စီးပွားရေးနှင့် နီးကပ်သော ဆက်ဆံမှုများ...
ချိုင်းနားရီဗျူး “မင်းသေ့ အမေးစာ”
Min Thayt September 4, 2020 September 4, 2020
ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ စာတွေအကြောင်း ထူးထွေပြီး မှာစရာ အကြောင်းမရှိပါ။ ထူးထူးထွေထွေ မေးစရာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမှာစာလို့ မတပ်ဘဲ အမေးစာ လို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ပါတယ်။ တရုတ် အကြောင်း ဆောင်းပါးတွေကို စုစည်းထုတ်ဝေလိုက်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကို ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ် ဟာ ကျနော် ထုတ်ဝေဖူးသမျှ၊ စာအုပ်တွေထဲမှာ စာမျက်နှာအနည်းဆုံး စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ချင်းစီဟာ...
Min Thayt May 23, 2020 May 26, 2020
သန္ဓိအုပ်ချုပ်စီမံမှုအဖွဲ့မှ ကိုဗစ် - ၁၉ စီးပွားရေးကုစားမှုအစီအစဉ် နှင့် တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ အကြောင်း ဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်ကို Sandhi Governance Institute Facebook Page မှတဆင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ✦ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲ၌ ၊ • တရုတ် - မြန်မာ စီးပွားရေးစင်္ကြန်တွင် ပါဝင်သည့် တရုတ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများ အကြောင်း• ကိုဗစ် -...
Articles PDF Download Perspective
Min Thayt October 25, 2019 October 25, 2019
မြန်မာကိုင်ဆွဲထားတဲ့ အမျိုးသားရေးဝါဒနဲ့ တရုတ်အမျိုးသားရေးဝါဒ အကြား ထိပ်တိုက်တွေ့မှုဖြစ်လာနိုင် သလား။ Nationalist-China-by-Min-ThaytDownload မြန်မာပြည်မှာ အမျိုးသားရေးဝါဒလို့ ပြောရင် များသောအားဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုသွားမြင်ကြတယ်။ နောက်ပြီး မဘသ အုပ်စုကို မြင်ကြပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုတာကို လက်နက်ကိုင်မြန်မာတပ်နဲ့ မဘသ အုပ်စုနှစ်ခုကိုပဲ ကိုင်ပြီး အနက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင် အင်မတန် ကျဉ်းမြောင်းရာကျပါတယ်။ အမျိုးသားရေးဝါဒဆိုတာ ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းတဲ့သဘောဆောင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တပ်နဲ့ မဘသ အုပ်စုဟာ...
Articles PDF Download Perspective Politics
တရုတ်၏ ဆူးကြီး သုံးချောင်း (သို့) တီ သုံး တီ
Min Thayt October 23, 2019 October 23, 2019
T-Three-T-by-Min-ThaytDownload တရုတ်ပြည်မှာ ယခုအချိန်အထိ နှစ်ဝင်နေတဲ့ ဆူးကြီး သုံးချောင်းရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို တီသုံးတီ လို့ခေါ်ကြတယ်။ (၁) တရုတ်ထိုင်ဝမ် (Taiwan) (၂) တီယံမင် (Tiananmen) (၃) တိဘက် (Tibet) အရေးကိစ္စ သုံးခုဖြစ်တယ်။ (၁) တရုတ် တိုင်ပေ ၁၈၈၅ ခုနှစ်မှာ၊ ဂျပန်က တရုတ်နဲ့ စစ်ဖြစ်ပြီး ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကို ကိုလိုနီနယ်မြေအဖြစ်...
တရုတ်၏ အိုင်ဒီယော်လိုဂျီ ပို့ကုန်
Min Thayt October 22, 2019 October 22, 2019
ဤဆောင်းပါးသည် တရုတ်ပြည်၌ ဒီမိုကရေစီဖြတ်တည်မှုတွင် ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒက အခုအခံ အတားအဆီးဖြစ်သ လား ဆိုသည့် အချက်ကို တင်ပြဆွေးနွေးထားသည်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်၏ လူမှုဓလေ့နှင့် စနစ် အပေါ် စွဲမြဲမှု တို့သည် ဒီမိုကရေစီအတွက် အတားအဆီးများ ဖြစ်နိုင်၏။ မဖြစ်နိုင်၏ ဆိုသည်ကို တင်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှုက ဒီမိုကရေစီကို လျစ်လျှူရှုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလား ဆိုသည့်...
Oversea-Chinese-by-Min-ThaytDownload တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေပေါက်ဖွားနှုန်းဟာ အင်မတန် မြင့်လာပါတယ်။ မော်စီတုန်းခေတ်က သန်းပေါင်း (၈၀၀) လောက်ရှိတဲ့ တရုတ်တွေဟာ အခု သန်းပေါင်း (၁၄၀၀) ကျော်လာပါပြီ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ တိန့်ရှောင်ဖိန်ခေတ်က တစ်အိမ်ထောင် သားသမီးတစ်ယောက် (One Child Policy) ကို ကျင့်သုံးပြီး တိုင်းပြည်လူဦးရေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစားကြိုးစား တရုတ်တွေရဲ့လူဦးရေတိုးနှုန်းဟာ များပြားတဲ့အနေအထားကို...